Whitachater Community Television မှ Hitachi HDTV ကင်မရာများသည်ထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးနှင့်အလင်းရောင်၏စိန်ခေါ်မှုများကိုကျော်လွှားနိုင်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Hitachi HDTV ကင်မရာများကိုဓာတ်လှေကားထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးနှင့် Whitewater အဝန်းရုပ်မြင်သံကြားမှာ Lighting စိန်ခေါ်မှုများကိုကျော်လွှား
Z-HD5000s ခြွင်းချက်ဗီဒီယိုကိုအရည်အသွေးနှင့်တံစို့ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်သာလွန်နိမ့်အလင်း sensitivity ကိုမကယ်မလွှတ်
Woodbury, နယူးယော့ဇန်နဝါရီလ 31, 2019 - Richmond, Indiana ပြည်နယ်-based အများပြည်သူ, ပညာရေးနှင့်အစိုးရ (တံစို့) access ကိုထုတ်လွှင့် Whitewater အဝန်းရုပ်မြင်သံကြား (WCTV) သူတို့၏ထုတ်ကုန်များ၏အမြင်အာရုံအရည်အသွေးကိုတိုးတက်လာဖို့ထွက်သတ်မှတ်ထားသည့်အခါသူတို့အနေဖြင့်သုံး Z-HD5000 HDTV ကင်မရာများဝယ်ယူ Hitachi Kokusai လျှပ်စစ်အမရေိ, Ltd (Hitachi Kokusai) မိမိတို့၏ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်။ ရရှိလာတဲ့အရည်အသွေးနဲ့ Hitachi ၏ထူးချွန် sensitivity ကိုကင်မရာများ WCTV န်ထမ်းများအနာဂတျမှာပိုပြီး Z-HD5000s ထည့်သွင်းဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြခြင်း, အလင်းရောင်လိုအပ်ချက်များကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်သည်အခြားစီစဉ်ထားစတူဒီယိုအဆင့်မြှင့်တင်ပေါ်တွင်ဘူတာရုံပိုက်ဆံကယ်တင်လိမ့်မည်။
WCTV ဝိန်းကောင်တီ၏နေထိုင်သူများမှသတင်းများ, အဖြစ်အပျက်လွှမ်းခြုံ, ပညာရေးအကြောင်းအရာနှင့်ဖျော်ဖြေရေး programming ကိုဆောင်ကြဉ်းရန်လူထုအခြေပြု, မပြု-များအတွက်အကျိုးအမြတ်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် 1988 အတွက်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အများပြည်သူလက်လှမ်း programming ကိုဖန်တီးလိုသောရပ်ရွာအဖွဲ့ဝင်များမှရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယိုအဆောက်အဦ, ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်သင်တန်းများပံ့ပိုးနေစဉ်ဘူတာသုံးခုတံစို့လိုင်းများလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါအင်ဒီယားနားတက္ကသိုလ်အရှေ့ကျောင်းဝင်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး, WCTV လည်း NAIA ဘတ်စကက်ဘောနှင့်ဘော်လီဘောပွဲစဉ်လွှမ်းခြုံအဖြစ်တင်သည့်အပါအဝင်တက္ကသိုလ်နှင့်၎င်း၏ပြေးခုံပစ်ဌာနများအတွက်ဘဏ်ဍာဖန်တီးပေးပါတယ်။
တစ်ခုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောစတူဒီယိုစစ်ဆေးပြုပြင်တပ်ဆင်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် 2018 မှာသူတို့ရဲ့အိုမင်းစတူဒီယိုကင်မရာများအစားထိုးတိုးတက်လာသောပုံရိပ်အရည်အသွေး WCTV များအတွက် key ကိုရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သာ SD ကထုတ်လွှင့်နိုင်ပါတယ်နေစဉ် "ကျနော်တို့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်အဆင့်မြှင့်ပြီ HD အနာဂတ်-အထောက်အထားအဖြစ် Facebook က streaming များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ On-demand ယူကျု့ချန်နယ်အပါအဝင်အွန်လိုင်းပေးပို့ဘို့, "ရိုင်ယန် Harris က, WCTV မှာဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်နှင့်ညွှန်ကြားရေးမှူးကရှင်းပြသည်။ "ကျနော်တို့အနေနဲ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုခလုတ်ပြီးသားပြောင်းလဲသွားတယ်ခဲ့သည် HDTop-of-the-line ကို, -capable NewTek TriCaster 8000 ဒါပေမယ့်ကင်မရာကပျောက်ဆုံးနေ link ကို ရှိ. , ကျနော်တို့အရည်အသွေးပိုကောင်းချင်တယ်။ "
WCTV တစ် System Integration ရဲ့ဒေသဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုပြပွဲမှာအဓိကကင်မရာအမှတ်တံဆိပ်အားလုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျက်, Hitachi ကင်မရာများစံမထိုက်မတန်ဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ "ကျနော်တို့ Duncan ကဗီဒီယိုဟန်ပြမှာ Hitachi ကင်မရာများကိုမွငျလြှငျ, ထို7နှင့်အတူအပြည့်အဝအထုပ်" အရောင် view finder ပါ, မှန်ဘီလူးများနှင့်ဖိုင်ဘာ adapter ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်များအတွက်စုံလင်ခြင်းရှိ၏, "Harris ကပြန်ပြောပြ။ "ကျနော်တို့ထို့နောက် Dayton, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်အတွက်သူချင်းတံစို့ဘူတာရုံ DATV မှာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုရှိအခြား Hitachi ကင်မရာများမြင်လျှင်, သူတို့သည်ငါတို့စစ်ဆင်ရေး fit မယ်လို့ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်လာတယ်။ ကျနော်တို့မျိုးစုံ Hitachi မော်ဒယ်များမှာကြည့်ရှုလျက်, Z-HD5000 သောငါတို့သည်ဖြစ်ကြသည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ငါတို့သည်ငါတို့၏အသိုင်းအဝုိင်းအဘို့ပြုဘို့ပဲတရားဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်စျေးနှုန်းမှာအောင်မြင်ရန်ကြိုးစားနေကြပါတယ်ပုံရိပ်၏အရည်အသွေးကိုပေးတော်မူ၏။ "
အဆိုပါ Hitachi ကင်မရာများအားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးအမြင်အာရုံသစ္စာအတွက်တိုးတက်မှုချက်ချင်းထင်ရှားခဲ့သည်။ "ဒီပုံအရည်အသွေးကိုသာမကကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းဘို့, ကျိန်းသေတာက သာ. ကောင်း၏ HD ကလစ်များ, ဒါပေမယ့်တောင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့စံ-ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ထုတ်လွှင့်ယခုအများကြီးပိုကောင်းကြည့်, "Harris ကပြောခဲ့သည်။ "ဒီပုံရိပ်ကိုကြည့်ရှုယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့စတူဒီယိုအတွက်မဆိုမစုံလင်မှုကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်အဖြစ်ကသည်ငါတို့အဘို့တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားစိန်ခေါ်မှုဖန်တီးထားပြီးသို့မှသာအများကြီးရှင်းလင်းဖြစ်ပါသည် - ထိုကဲ့သို့သောကုလားကာတွင်းအဖြစ်, ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကြမ်းပြင်လှည်းဖို့မေ့လျော့နေလျှင်။ အရောင်မျိုးပွားလည်းခြွင်းချက်ဖြစ်၏။ "
အဆိုပါ Hitachi ကင်မရာများ၏ထူးခြားပြောင်မြောက် sensitivity ကိုလည်းထပ်မံမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌ amplified စေခြင်းငှါချက်ချင်းအကျိုးခံစားခွင့်ပေးထားသည်ဟုသိရသည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့စတူဒီယိုအဆင့်မြှင့်အလယ်၌နေဆဲဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကျနော်တို့အထဲကသေဆုံးနေကြောင်းအဟောင်းအလင်းရောင်တွေအများကြီးရှိသည်," Harris ကရှင်းပြသည်။ "ဒီ Z-HD5000s အများကြီးပိုသူတို့အားအိုမင်းအလင်းအိမ်၏ခွင့်လွှတ်ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟောင်းနွမ်းကင်မရာများနှင့်အတူကျနော်တို့မျက်ဝန်းအပေါင်းတို့သည်လမ်းဖွင့်ဖို့လိုအပျမြားနှငျ့ပုံသဏ်ဌာနျနေဆဲမှောင်မိုက်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဤမျှလောက်ပိုပြီးထိခိုက်မခံတဲ့အနေကြောင့် Hitachi ကင်မရာများနှင့်အတူငါတို့သည်မျက်ဝန်းကိုပိတ်ထား back နိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့, Z-HD5000 ရဲ့ sensitivity ကျွန်တော်တို့ရဲ့ illumination လိုအပ်ချက်များကိုအောက်ပိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်ထားအလင်းရောင်အဆင့်မြှင့်အပေါ်ပိုက်ဆံကယ်ဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ "
တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားထုတ်လုပ်သူများထံမှသော WCTV ရဲ့ယခင်ကင်မရာများ, နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာအရည်အသွေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုအထူးသဖြင့်သပိတ်မှောက်နေကြပါတယ်။ "ကျနော်တို့အပိုကင်မရာများလိုအပ်တော့ဘယ်မှာကိစ္စများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဟောင်းတွေကင်မရာများနှင့်အတူ Z-HD5000s ရံဖန်ရံခါသုံး," Harris ကပြောခဲ့သည်။ "ငါတစ်တသမတ်တည်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်အဖြစ်ငါအဟောင်းတွေယူနစ်၏ output ကိုက်ညီ '' စကားမပြောနိုင်သောချ '' ရန် Hitachi ကင်မရာများ၏အသွင်အပြင်လိုအပ်တယ်, ကလုပ်နေတာမုန်း။ "
ကြောင်းလိုအပ်ချက်ကိုရှောင်ရှားရန်, Harris ကမကြာမီအနည်းဆုံးပိုပြီး Z-HD5000 ဝယ်ယူရန်မျှော်လင့်နေသည်။ "ကျွန်တော်တို့ဟာကိုဖုံးလွှမ်းရန်လိုအပ်ပါတယ်အစိုးရအစည်းအဝေးများအဖြစ်တစ်ချိန်တည်းမှာကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖိုရမ်များ၏ Multi-ကင်မရာအညွန့်ရှိစေခြင်းငှါလာသောအခါကျနော်တို့မကြာခဏ, အထူးသဖြင့်ရွေးကောက်ပွဲသံသရာစဉ်အတွင်းထက်ပိုသုံးကင်မရာများလိုအပ်ပါတယ်" ဟုသူကရှင်းပြသည်။ "ငါသည်ငါတို့သည်ငါတို့၏အဟောင်းတွေ, နိမ့်အရည်အသွေးကင်မရာများအတွက်ရောထွေးရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေတဲ့စတုတ္ထ Z-HD5000 ရဖို့လိုပါတယ်။ "
ထိုအတောအတွင်းမှာတော့ WCTV ရဲ့ပထမသုံး Z-HD5000s ဘူတာရုံဆည်းကပ်ခဲ့သောအကျိုးကျေးဇူးများအပေါငျးတို့သပို့ဆောင်နေကြသည်။ "ဒီ Hitachi ကင်မရာများကျိုးနပ်ဝယ်ယူမှုပါပြီ, ငါတို့သည်သူတို့ကိုအတူအလွန်ကျေနပ်နေ," Harris ကကောက်ချက်ချခဲ့သည်။ "ဒီ Z-HD5000 ငါတို့အလိုအရည်အသွေးထပ်တိုးပေးနေချိန်မှာငါတို့စတူဒီယိုအတွက်ဖန်တီးမှုအရလွတ်လပ်ခွင့်ပေးသည်တစ်ခုကောင်းစွာထား-အတူတူ, လွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှုကိုကင်မရာဖြစ်ပါတယ်။ "
Hitachi Kokusai လာမည့် 4409 မှာတဲ C2019 အတွက်ပြပါလိမ့်မယ် NAB ပြရန် Las Vegas မှာ။
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား 2019-01-31
ယခင်: FXhome သည်၎င်း၏ Vast VFX Plugin စာကြည့်တိုက်ကို Launch of Ignite Pro V4.0 ဖြင့်ချဲ့ထွင်သည်
နောက်တစ်ခု: Argosy BVE 2019 မှအဆုံး-to-end Signal ဖြန့်ဖြူး & Intelligent ကွန်ယက်အဖွဲ့ဆောင်တတ်၏